News & Activities – Technological University (Taunggyi)
March 15, 2022 March 15, 2022 tutaunggyi admin
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) မှ ပထမ အကြိမ် ထုတ်ဝေမည့် တက္ကသိုလ် အဆင့် ဂျာနယ် University Journal of Research on Engineering , Science and Education (UJRESE 2022) ကို ထုတ် ဝေသွားမည် ဖြစ်သည်။ စိတ်ပါဝင်စား သူများ အနေ ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ Journal Format ကို down load ရယူပြီး ပေးပို့ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ၏ Read More …
News & ActivitiesLeaveacomment
* * * မီးပုံးပျံလွှတ်ပွဲ/ ဓမ္မစကြာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ/ ဆီမီး ၂၀၀၀ ထွန်းညှိပွဲ နှင့် စတုဒီသာ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းပွဲ ပြုလုပ် * * *
October 31, 2020 November 17, 2020 tutaunggyi admin
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) မှ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာမကြီး ဦးဆောင်၍ ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ စုပေါင်းပြီး ဓမ္မစကြာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက် ဆီမီး ၂၀၀၀ ထွန်းညှိပူဇော်ခဲ့ပြီး စိန်နပန် မီးပုံးပျံ အပါအဝင် မီးပုံးငယ်များလည်း လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကြွရောက်လာသော ဧည့်သည်များကို ကြာဇံဟင်းခါး / မုန့်လုံးရေပေါ် / ကိတ်မုန့် ကော်ဖီ/ အကြော်များဖြင့် စတုဒီသာကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
* * Huawei ၏ Sky Seeds for the Future အစီအစဉ်တွင် မောင်ရန်လင်းအောင် ဒုတိယဆု ရရှိ * *
September 30, 2020 October 8, 2020 tutaunggyi admin
Huawei ၏ Sky Seeds for the Future အစီအစဉ်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)၊ IT ဌာန မှ မောင်ရန်လင်းအောင် က ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
News, News & ActivitiesLeaveacomment
* * ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရန် နှင့် လူစုလူဝေးနေရာများ ရှောင်ရှားရန် * *
September 25, 2020 October 8, 2020 tutaunggyi admin
က်ရှိ ကာလ တွင် ကမ္ဘာအနှံ့ ပြင်းထန် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ပျံ့ နှံ့လျက်ရှိရာ အသက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စဉ်များလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တို့ မှလည်း ကူးစက်မြန် ပြင်းထန် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် သတိပေး စာများ လည်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာလျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)ရှိ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး Read More …
* * Donation of Masks and Hand Sanitizers * * *
September 9, 2020 October 8, 2020 tutaunggyi admin
Technological University (Taunggyi) Teachers’ Union and Second-year Mechanical students donate surgical masks and hand-made masks to protect COVID-19 for 211 teachers and staff. They also donate Hand Sanitizer to all Departments. * * * Mask နှင့် လက်ဆေးရည်များလှူဒါန်း * * * Read More …
* * * ISO စစ်ဆေးခြင်း Online မှ ဆောင်ရွက် * * *
September 9, 2020 November 19, 2020 tutaunggyi admin
In Technological University (Taunggyi), ISO 9001-2015 External Audit Examination for the 2019-2020 Academic Year was held at 2.9.2020. Due to the current epidemic of COVID-19, all screening activities were performed via online. နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) တွင် ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် ISO 9001-2015 External Read More …
Uplift Technology with Innovation
TU Taunggyi Main Gallery
Total views : 82981